Ahoana ny fanovana ny fahatahoranao ny tsy fahombiazanao amin'ny antony manosika hahomby - Blog
Ahoana ny fanovana ny fahatahoranao ny tsy fahombiazanao amin'ny antony manosika hahomby
Tetikasa tsy nahomby, tanjona kendrena ary nofinofy tsy tontosa. Inona no itovizan'ireo zavatra rehetra ireo? (ankoatry ny fanaovana fahantrana iray)
Ny fiombonan'izy ireo iraisana dia tsy araka ny eritreritrao azy, tsy fahombiazana , fa ny marimarina kokoa, ny tahotra ny tsy fahombiazana .
Mampatahotra ny fandraisana zavatra sarotra. Mety ho toa mampatahotra sy mampatahotra izy io ary miteraka tsy ilaina adin-tsaina sy ny fanahiana. Manahy izahay ary midina ny “Ahoana raha?” lavadavaka izay manafoana antsika fotsiny amin'ny fisalasalana sy ny fahatahorana tena.
Ahoana no fomba hialantsika amin'ny tahotra ny tsy fahombiazantsika ary hampitomboantsika ny vintana hahita fahombiazana? Ireto misy torohevitra vitsivitsy hanampy anao hihoatra ny tahotrao sy hahatratra ny tanjonao.
Ny tahotra no sakana lehibe indrindra hahombiazanao
Ny sakana lehibe indrindra amin'ny fahombiazana dia ny tahotra ny tsy fahombiazana. Izy io dia afaka mandringa antsika, manasarotra ny handrosoana sy hahatratra ireo tanjona napetrakay ho an'ny tenantsika.
Ny tahotra dia mpanimba nofinofy mandroba antsika amin'ny fanoloana fanantenana amin'ny fisalasalana. Ho fanampin'izany, ny tahotra dia miteraka tsy fahatapahan-kevitra. Izahay dia mitady ny lalan'ny fanoherana faran'izay kely indrindra amin'ny asa rehetra, noho izany isika dia mijery sy manadihady izay mety ho fomba maharary indrindra hahatratrarana ny tanjontsika.
Ny tsy fahatapahan-kevitra dia tsy manampy antsika hiroso amin'ny zavatra hafa fa mamela antsika tafahitsoka amin'ny fotony, tsy mankaiza.
Mihevitra izahay fa amin'ny fisorohana ny zava-tsarotra dia mampitombo ny fahafahantsika hahita fahombiazana, fa ny fiainana kosa manana fomba mampihomehy mamily ny latabatra amintsika.
Impiry moa ny fahatapahana fohy no farany ratsy lavitra noho ilay lalana lava kokoa, toa “sarotra”?
Impiry ianao no nahatsapa fa mila mamerina ny asa ianao satria tsy nandeha namindra ny hitsin-dàlana?
Ny manapaka zorony dia tsy mahavonjy fotoana, vola na fiadanan-tsaina. Tsy maintsy 'manao ny fotoana' ianao araka ny voalazan'izy ireo.
Maka hitsin-dàlana fohy satria toa ny safidy faran'izay mampatahotra, mahomby indrindra, matetika kokoa noho ny tsy miverina, mamela anao hitebiteby sy hiady saina indray.
Ekeo ny tahotrao: Tena misy izy ireo, manan-kery izy ireo
Toa torohevitra ratsy indrindra azo inoana izany, fa henoy aho.
Ny fametrahana ny lohanao ao anaty fasika ary mody milaza fa tsy eo ny ahiahinao dia tsy mahatonga azy ireo handeha raha ny marina, mazàna mitombo ny izy ireo.
Efa nanandrana nanery tena ve ianao tsy mieritreritra zavatra? Izy io dia mahatonga anao hieritreritra bebe kokoa momba azy io, na, na mety miasa mandritra ny fotoana fohy aza izy io, dia miverina amin'ny fotoana tsy ampoizina indrindra ilay eritreritra manjelanjelatra.
Ny hatahoranao dia hijanona ao ambadiky ny sainao, ho fety ary hikitika anao.
Aza atao izany raha ekenao fa matahotra ianao, ary izay tena atahoranao dia soraty, ary mamorona drafitra handrosoana.
Ny fampidirana an-taratasy ny tahotrao dia mety ho cathartic, ary ampio handamina izany eritreritra mampivadi-po izany ho zavatra mifanaraka izay azonao zahana.
Mamadika ireo mpampihorohoro ho lasa 'To-Dos'
Rehefa mahita azy ireo amin'ny taratasy ianao dia mety toa tsy mampatahotra loatra ny tahotrao. Raha vao concretely eo alohanao izy ireo dia afaka manokana fotoana handresena azy ireo.
Apetraho amin'ny tenanao ity fanontaniana manaraka ity: Efa akaiky ve izany tahotra izany? (toy ny ankavanana amin'ity faharoa ity, anio, amin'ity herinandro ity, amin'ity volana ity)
Ie? Avy eo hiatrehana izany eo no ho eo. Ho tsapanao kokoa ny famonoana an'io biby goavam-be io, toy izay ny famelana boogeyman hisalasala tena hihoatra ny fandrianao.
Ny tahotra tsy ho ela dia: 'Raha tsy mahavita ity tatitra ity amin'ny alatsinainy aho dia tsy hahatratra ny fe-potoana voafetran'ny mpanjifa. Mety ho very ny client amiko, ary vokatr'izany dia hanimba ny asako izany. ”
inona no dikan'ny hoe miadana amin'ny lehilahy iray?
Tsia ve ny valin'ny fanontaniana? Raha lavitra sy tsy azo porofoina ny tahotrao dia ampirimina andro hafa izany.
Ohatra, ' Ahoana raha holavina aho? ” tahotra iraisana, saingy tsy misy “daty voatondro” io fanambarana io.
Ny fandavana dia ampahany mitohy amin'ny fiainana izay mety hitranga anio, rahampitso, na herintaona manomboka izao. Tehirizo ity negativa ity ary mifantoha amin'ny fanaovana izay tsara indrindra vitanao.
Ny tahotra dia mivoaka eny ivelany, eny ambony latabatra, ary azo ovaina ho zavatra hatao ankehitriny: izany hoe manatsara ny fahatokisanao tena, na fiatrehana kiana mahomby .
Raha voatsipaka ianao, ka manamafy izany tahotra izany, dia jereo ny volafotsy. Ity dia fotoana iray ahafahana mitombo, fanamby izany fa tsy lalao-ender no mandroso hatrany.
Ahoana ny fomba hampijanonana ny fahatsapana ho tsy fahombiazana na ho very
7 Antony fisainana be dia be no tsara kokoa noho ny fisainana fahantrana
Zavatra 9 Ny olona mahomby dia tsy mandany ny fotoanany
Ahoana ny fomba handresena ny tahotra fanovana ary hiatrehana fahatokisan-tena amin'ny fanamby vaovao
Ireo karazam-pihetseham-po 10 izay azonao ampiasaina hanatrarana ny tanjonao
Ny refy tsara indrindra amin'ny fahombiazanao dia ianao
Raha vantany vao manana drafitra ianao handresena ny tahotrao, dia aza manadino ny fahatongavanao ho olona tsy tokony hampitony azy ireo.
Aza mampitaha ny tenanao amin'ny hafa na refesina amin'ny azy ireo ny fahombiazanao. Natao ho an'ny tsy fahombiazana io satria olonao manokana ianao, miaraka amin'ny filanao manokana, tanjona tsy manam-paharoa ary ny toe-javatra iainanao.
Ahoana no ahafahako ho tsara sipa
Azonao atao ny mijery ny hafa ho loharanon'ny aingam-panahy, satria ny fananana tanjona dia fomba iray tsara hampifantohana ny herinao, fa raha vao nametraka lalana ianao dia anao irery fa tsy an'ny olon-kafa.
Ny dia ataonao dia tsy hitovy amin'ny olona tianao sy alain-tahaka, ary tsy tokony ho izany. Te-handray ny fitaoman'izy ireo ianao ho toy ny loharanom-panentanana, nefa aza miova ho olonao.
Amin'ny fiezahana handositra ny tahotra atahorana ny tsy fahombiazana, ny olona dia mijery ny fahombiazan'ny hafa ho fomba iray hialana amin'ny fandrika, ary manandrana maka tahaka an'io dia io. Nefa tsy maintsy tadidinao fa tsy ho anao ny tsy fahombiazan'izy ireo.
Mety handray ny torohevitr'izy ireo ianao ary tsy hanao 'X', fa ny 'Y' tsy tapaka kosa dia hipoitra sy hamoaka anao - ary tsy maninona izany. Tongasoa eto, raiso, mianara aminy, ary mandrosoa hatrany amin'ny tanjonao.
Tsy misy fahombiazana raha tsy misy risika
Fantaro fa ny olona mahomby rehetra dia mpandray risika amin'ny fony. Raha tsy manao risika zavatra iray ianao dia tsy mahazo na inona na inona.
Fa maninona no amin'ny fomba sarotra? Fa maninona no manaintaina kokoa noho ny tokony hisy? Matetika isika no misafidy izay mora, mahazo aina ary azo antoka. Tsy misy amin'ireo zavatra ireo no mitondra fahombiazana satria raha te hahomby, dia mila izany avelao ny faritra mampionona anao .
Raha tsy te handray risika ianao dia tsara izany, nefa tadidio fa tsy hahatratra tanjona avo loatra koa ianao, na hahita ny fahatanterahan'ny nofinao.
Tsy misy fahombiazana raha tsy misy tsy fahombiazana
Raha te hiroso amin'ny fandrosoana dia mila mihemotra ianao. Na dia toa adala aza ity dia marina izany.
Ny fahombiazana sy ny tsy fahombiazana dia miara-miasa - tsy afaka ny hahomby ianao raha tsy miaina tsy fahombiazana.
Raha tsy manana herin'ny maizina ianao, na mahita ny ho avy, dia tsy hanana ny valin'ny zava-drehetra ianao. Tsarovy ity andianteny ity: 'Tsy fantatro,' ary zatra milaza azy. Jereo avy eo izay tsy fantatrao, mametraha fanontaniana, mihainoa ary ianaro.
Aza matahotra ny tsy hahomby satria cliché araka ny fahitana azy dia ny tsy fahombiazana no mpampianatra tsara indrindra ho anao. Tsy hianatra mandehandeha amin'ny toe-javatra sarotra na oviana na oviana ianao mianatra mitantana olona sarotra , raha mbola tsy nitifitra na aiza na aiza ianao.
Atreho ny tahotrao ary ataovy tsy mahomby ny namanao.
Hevitra vitsivitsy manan-danja hialana amin'ny manaraka rehefa mahatsapa ianao fa malemy noho ny tahotra ny tsy fahombiazana:
Ekeo fa ny tahotra no sakanao lehibe indrindra amin'ny fahombiazana, avy eo avereno jerena ny tahotrao: tena izy ireo, ary mitombina.
Soraty ny tahotrao, ekeo fa eo izy ireo, ataovy ireo zavatra azonao ovaina dieny izao, ary afaho ny fisalasalana manjavozavo ho asa tokony hatao.
Aza mandrefy ny tenanao amin'ny fahombiazan'ny hafa, tsy ianao ireo, ary tsy hitovy ny dianao.
Fantaro fa ny risika dia voajanahary amin'ny fahombiazana, toy ny tsy fahombiazana. Tsy afaka manenjika ny nofinao ianao raha tsy fantatrao fa hianjera ianao, hiakatra ianao ary tsy fantatrao ny zava-drehetra.
Misavoritaka ny olombelona, ​​ary ny làlan'ny fahombiazana dia tsy tsipika madio sy mahitsy, tsotra toy ny A mankany B. Tsy maninona ny matahotra, ary tsy maninona ny mianjera, aza mijanona fotsiny ary ajanony ny fiainana anaty tahotra.
Ny herin'ny fitsaboana ara-mozika hanampiana hanamaivanana ny famoizam-po, ny fihenjanana ary bebe kokoa
Valety 10 tsara indrindra amin'ny tantaran'ny WWE
'Avy amin'ny olona 200 amin'ity?' - Ny fomba nanampian'ny resak'i AJ Styles tao amin'ny lampihazo nanampy ny WWE Superstar navoakany
Niaro azy ny ekipan'i Addison Rae taorian'ny sioka taloha nanondro fa nifidy an'i Donald Trump izy
Famantarana lehibe 7 no hitan'ny mpiara-mitory aminao ho safidy fa tsy laharam-pahamehana
'Toa hafa noho ny ambin'ireo adala ireo ianao' - Booker T dia nidera ny superstar teo imason'ny mpiady hafa (Exclusive)
Andrade dia naneho hevitra tamin'i Charlotte Flair nolazaina taminy fa toa lehilahy izy
Niteraka resa-be teo amin'ireo mpankafy an-tserasera i Harry Styles sy i Olivia Wilde momba ny mariazy
Ahoana ny fomba itiavana empath: torohevitra momba ny fifandraisana tsy misy Bullsh * t 15
Rahoviana ny Legacies Season 3 no mankany Netflix? Izay fantatsika hatreto
'Rock ambany': Addison Rae dia miseho amin'ny seho Jimmy Kimmel miaraka amin'i David Spade, ary tsy gaga ny internet
3 Superstars WWE nesorina tamin'ny tranokalany, ary 2 izay voafafa tao amin'ny Hall of Fame
ny fomba hialana amin'ny olona tsy tia anao mihitsy
zavatra hatao rehefa leo ianao
manjaka i romana de ambrose sy seth rollins
anontanio ny namanao hoe inona izany